भैरव मावि नौमूलेको अध्यक्षमा शशि – मातृभूमी
मातृभूमी संवाददाता । २७ असोज दैलेख
भैरव माध्यामिक विद्यालय नौमूलेको अध्यक्षमा नौमूलेका युवा नेता शशि वि.क. चयन भएका छन् । सोमवार नौमूलेमा भएको भेलाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा युवा नेता शशि वि.क.लाई सर्वसहमतिले चयन गरेको हो ।
लामो समयदेखी नौमूलेको विकासका लागी राजनिति गरीरहेका युवा नेता शशि वि.क. विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा चयन भएपछि विद्यालयको थप स्तरउन्नतीको अपेक्षा गरिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा चयन भएपछि उनको कार्यकाललाई महत्वपुर्ण रुपमा हेरिएको स्थानीयले वताएका छन् ।